I-Apple neSpotify engxoxweni yokuhlanganisa uSiri ngokujulile? - ITELE RELAY
Accueil » I-TECH & ITELECOM I-Apple neSpotify engxoxweni yokuhlanganisa uSiri ngokujulile?
I-Apple neSpotify engxoxweni yokuhlanganisa uSiri ngokujulile?
Abasizi bedijithali yezwi abakwazi ukwenza eziningi zezenzo ngokuyisisekelo. Ukuqhubeka futhi senze impilo ibe lula, sidinga ukuhlanganisa ukujula kwizicelo. Ngokushesha uSiri angakwenza nge Spotify.
Uma umuntu kufanele asho isizathu esenza ukuthi abasizi bezwi abanjengo-Alexa noma uMsizi we-Google bavame ukuhlangana nabathengi babo Sirikuzoba ngenxa yokuthi izinkampani ezinjenge-Amazon ne-Google zazisheshe zivulele izazi zazo onjiniyela beqembu lesithathu. I-Apple iqhubeka ngendlela efanayo kepha ihamba kancane. ngokuvumelana umbiko wakamuva, Inkampani ye-Cupertino ne-Spotify okwamanje ziyaxoxwa ukuze kuhlanganiswe uSiri ekujuleni kwesicelo sokusakazwa komculo. Lokhu kuzovumela uSiri ukuthi aqhubeke ngokulawula umculo wakho.
NguLwazi obika izindaba. I-Apple neSpotify njengamanje basebenza ndawonye ukuthola ukuthi uSiri anganikela kanjani ngokwengeziwe ngezilawuli zeSotify ngemiyalo yezwi. Kungakhishwa, empeleni, izihloko zokufunda, uhlu lwadlalwayo nama-albhamu. Ngaphezu kokuhlanganiswa kweSiri, kubonakala sengathi lezi zingxoxo zingashintsha isimo seSotify maqondana ne-Apple.
Ukulawulwa kwesiteji okuthuthukile kokusakazwa komculo kusuka ku-iOS 13?
Kumele kushiwo ukuthi phakathi kwalezi zinkampani ezimbili, isivumelwano asiphelele impela. Esikhathini esithile esidlule, uSpotify wamangalela u-Apple ngokungavumeli ukuthi usetshenziswe ku-HomePod naseSiri. Njengoba umbiko weThe Information ucacisa namhlanje, ithoni ibukeka sengathi iguqukile kakhulu, inkulumo iyasibeka kabi. Kunzima ukwazi ukuthi lokhu kuhlangana kabusha phakathi kwalezi zikhulu ezimbili kuzovumela isithangami sokusakaza sibe nokufinyelela okuthuthukile kakhulu kwe-Siri noma uma kuphela kuthinta ukufinyelela kohlaka lweSiriKit oluzokwethulwa nge-iOS 13 ... Njalo uma ungumsebenzisi weSpotifiy, ungafuna ukubheka phambili kusibuyekezo ku-iOS 13. I-fortiori uma ufuna ukusebenzisa iSotify neSiri ndawonye. Ukubekezela, ukubekezela!
Eminye imikhiqizo yakwa-Apple izothwala intela yokungenisa eyi-10% ekuqaleni kukaSepthemba
Isivumelwano esihle: -350 € ku-iMac 5K 27 inches
I-Pro Pro entsha inganikeza imodyuli yekhamera kathathu
Lesi sihloko sivele kuqala https://www.begeek.fr/apple-et-spotify-en-discussion-pour-integrer-plus-profondement-siri-325224
AbakwaNetflix ukusebenzisana noDavid Benioff noDan Weiss ekwenzeni uchungechunge olusha
Isivumelwano Sosuku: le ncwajana yemidlalo egcwele imibala yemidlalo yemidlalo - iTech - iNumerama
Usuku Lwamathoyilethi omhlaba: Izingane zesikole ze-8 ezikwi-10 Zikhetha Ukugcina - i-VIDEO
UTrump uzofakaza ?, Abaqondisi bendawo yeFallout Ingxoxo & IGoogle Map - ngoLwesibili ... - VIDEO
LESI GIRL SIQINILE KULABO ... - IVideO
Kuhlukumeza amasosha aseMaliya eBurkina Faso: Ungqongqoshe wezokuvikela waseBurkina ubiza ngokuthi "ukucindezela" ngokumelene "nabantu"
USheila: ukuxabana kwakhe eLaeticia Hallyday ku
ABANTU & LIFESTYLE7,690
I-TECH & ITELECOM2,614